Farmaajo khudbadiisii maanta kagama hadlin dagaalka Al shabaab iyo Amniga – Somali Top News
October 9, 2019 Somali Top News	0 Comments Farmaajo khudbadiisii maanta kagama hadlin dagaalka Al shabaab iyo Amniga
Bal aan eegno qaar ka mid ah qodobadii uu madaxwaynaha uga hadlay khudbaddii uu manata ka jeediyay furitaankii kalfadhigii 6aad ee baarlamaanka oo Al shabaab iyo amniga uusan ku soo hadal qaadin.
Farmaajo Kama hadlin Al shabaab iyo Amniga
Dhibaatada ugu weyn ee maanta Soomaaliya heysata waa amniga iyo kooxaha argagixsiada ee dalka ka jira sida Al shabaab iyo Daacish oo sii xoogeysaneysa.
Ka gaabsiga ka hadlidda Al shabaab iyo amaanka guud ee dalka shaki badan ayuu abuurayaa iyadoo cedeymo badan ay muujinayaan in dowladda ay ku dhexmilmeen xubno shabaab katirsan.
Waxaa sidoo kale banaanka imanaya walwal laga qabo madaxda dowladda oo ah iney iyaga Al shabaab la shaqeeyaan hadhowna isu badali doonaan isla kooxdaas.
← Ottawa-raised Ilwad Elman on Nobel Peace Prize shortlist
Madaxweynaha Puntland oo la sheegay inuu DF u ballanqaaday yareynta khilaafaadka →
Al Shabaab Oo Gobalka Shabeelaha HooseKu Toogtay Nabadoon 93 Sano Jir Ah
Ciidamada dowladda oo deegaano badan kala wareegay Al shabaab
Villa Soomaaliya oo lagu eedeeyay qaska Galmudug ka socda